एमसीसीले ततायो सडक र राजनीति | रेडियो झापा 100.7 MHz.
एमसीसीले ततायो सडक र राजनीति
रेडियो झापा 100.7 MHz. शुक्रबार, फाल्गुण १३, २०७८ ११:५३:२६
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी जसरी भए पनि संसदबाट पारित गराउनतिर नै ध्यान केन्दित गरिरहनु भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संग पनि उहाँले बेला बेलामा संवाद अघि बढाइरहनु भएको छ । आज एमसीसीकै कारण मुलुकको राजनीति तरंगित छ ।
भोली नेपाली राजनीति के हुन्छ यसै भन्न सकिने अबस्था छैन । यसले हरेक पार्टी, गठबन्धनमा समेत विभाजन ल्याउने संकेत देखिएको छ ।
राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेर जाने सम्भावना देखिदै छ । अहिले सत्तागठबन्धन नै संकटमा छ । यही कारणले भोली दलका नेताहरु टुटफुट हुन सक्छन । राजनीकि ध्रुवीकरण बढेर गयो भने देश संकटमा पर्ने सम्भावना छ ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरु गम्भिर बन्न जरुरी छ । सत्तागठबन्धन त धरापमा परि सक्यो । एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र मतमतान्तर देखापरिरहेको छ ।
प्रम देउवा गठबन्धन जोगाउनेभन्दा पनि एमसीसी जसरी भए पनि पारित गराउने रणनीतिमा हुनुहुन्छ । यसले द्धन्द निम्त्याउन सक्छ ।
प्रम देउवाले एमसीसीको एजेन्डामा प्रतिपक्षी दल एमालेको सहयोग मागिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताहरु पटक पटक भेटघाट गरिरहेका छन ।
प्रम देउवाले हिजो बेलुका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बालुवाटार बोलाएर संवादमा जुटे । प्रम देउवा र ओली बीच भद्र सहमति भएको कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन् ।
बेला बेलामा राजनीतिले कसैलाई नजिक ल्याउने र कसैलाई टाढा पु¥याउने गरिरहेको छ । एमसीसी संसद्मा अनुमोदनका लागि टेबुल गरिएको छ ।
आज यो बिषयले बहस र मत विभाजनको स्थिति उत्पन्न गराएको छ ।
जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिको सार्वभौम संसदले देशको हितमा फैसला गरोस् भन्ने जनताको माग छ । सडकबाट जनताले एमसीसी पारित गर्न हुदैन भन्दै चर्को आवाज र सडक प्रर्दशन गरिरहेका छन । प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच झडप हुँदा धेरै घाइते भएका छन ।
यसले समस्या निम्त्याउने देखायो । यो विषय सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । हाम्रा देशका नेताहरु दुरदर्शी हुन नसक्दा हामीले बेला बेलामा दुख्ख पाइरहेका छौं ।
अझै कति दुख्ख् भोग्नु पर्ने हो थाहा छैन । जनता आर्कोशित बनेर सडकमा छन । एमसीसी पास गर्ने नेताहरुलाई आ आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रबेश गर्न नदिने जनताले सडकबाट भनिरहेका छन । सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन । सडक यसरी तातेको छ की दुनियाको ध्यान खिचिरहेको छ ।
अब समयमै दलहरुले बिचार गर्नु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ ।
मुलुक बर्बाद पार्ने काम कसैले गर्नु हुदैन । सत्ता र कुर्सी भन्दा देश ठूलो हो । देश रहे मात्र सत्ता र कुसी पाइन्छ । अब बिबेक पुर्याउने बेला भएको छ । हतारमा कुनै पनि काम गर्नु हुदैन भोली पछुताउनु पर्ने हुन्छ ।